Izay Nisongadina an-Tserasera Avy Amin’ny Firenena Mpiteny Portiogey Nandritra Ny Taona 2011 · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Maisie Fitzpatrick
Voadika ny 03 Janoary 2012 8:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, 日本語, Português
Ny Fiteny Portiogey sy ny Kolontsaina
Tamin'ny volana febroary izahay nitatitra ireo bolongana maro nilaza ny fitiavany ny fiteny portiogey, ka nanome voninahitra ny fitenim-paritra maro dia maro [mg]iresahan'olona mihoatra ny 200 tapitrisa manerantany.
Hau nia lian, hau nia rain (Ny Fiteniko, ny tanindrazako). Saripika Sapo Noticias Timor Leste (fananan ny rehetra)
Tamin'ny volana Mey ny gazety @Verdade, mpiara-miombon'antoka aminay ao Mozambika, namahavaha ny [fiteny] portiogey ho fiteny mampakatra ny maha-mozambikana[mg].
Tamin'ny fitantarana ny tany Timor Atsinanana no nanadihadian'ny Global Voices ny anjara asan'ny fiteny [maro] ho mampiavaka manokana ny firenena iray[mg] fa io firenena io dia manana tenim-pirenena 16 sy fitenim-paritra ampolony. Bolongana sasantsasany any Cap Vert indray nanolo-kevitra fa misy “ny anjara toerana ara-tsosialy samihafa” ho an'ny fiteny roa ifampiresahan'ny olona, Kiriolona [fr], sy ny fiteny ofisialy, Portiogey.
Niditra teo amin'ny sehatra politika kokoa ny hetsika an-tserasera teo amin'ity lohahevitra ity, raha naresaka ny volavolan-kevitra hampidirana an'i Ginea lalovan'i Ekoatera ho mpikambana ao amin'ny Vondro-Pirenena miteny Portiogey, na dia malaza ny tsy dia fanajany loatra ny zon'olombelona [fr].
Brezila: Lalambe mankany amin'ny Fampandrosoana
Na dia eo aza ny krizy iraisampirenena, niaina fotoana mihiratra teo amin'ny lafiny ara-toekarena natosiky ny fandaniana isan-tokantrano kosa i Brezila. Mba hitazonana izay fitomboana izay dia nanakenda ny tontolo iainana sy ny zon'olombelona ny politikam-pampandrosoana.
Sandan ny filana angovo avy amin ny zavamaniry: nesorina tamin ny taniny ny vazimba teratany Guarani Kaoiwa avy amin ny fokonolon ny Laranjeira Nhanderu 14 volana lasa izay mba hambolena fary. Saripika Annabel Symington, copyright Demotix (10/21/10).
Hita ho tany heverina fa azo trandrahina eo amin'ny lafiny fambolena sy akora ary angovo ny alan'i Amazon. Niteraka ahiahy sy fihetsiketseham-panoherana ny fandrisihana hitrandraka ny ala sy ny ara-pambolena hita eo amin'ny lalàna vaovao mifehy ny ala ao Brezila. Fandraharahana “Maitso” mifantoka amin'ny angovo avy amin'ny zavamaniry sy ny fanoloana ny hazo nadaboka amin'ny fambolena kininina dia samy ahitana ny fanao tsy maharitra na eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana na eo amin'ny fiaraha-monina. Ny ady tany nataon'ny mpandraharaha ara-pambolena moa dia niteraka famonoana mpikatroka sy mpitarika vazimba nandritra ny taona 2011. Nefa dia mbola mikiry ny hanondrana ny fombany eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ara-pambolena any amin'ny firenen-kafa tahaka an'i Mozambika ihany i Brezila raha tsy hijery afa-tsy izy.
Ny tatitra manodidina ny Tohodranon'i Belo Monte no tena nampitabataba indrindra tamin'iny taona iny, izay nampiray ny mpiaro ny tontolo iainana, ny vazimba teratany ary ny Breziliana mipetraka manamorona ny reniarno tratrany. Ny Fihetsiketsehana eo amin'ny toerana misy ny tohodrano sy ny tanandehibe no nanaitra ny iraisampirenena [mg] ka nihaika ny politikan'ny zon'olombelona eo amin'ny governemantan'i Dilma Rousseff [mg]. Tsy nihena ny herin'ny hetsika na dia nanomboka aza ny fananganana ny toby famokarana, fa naka endrika samihafa, ka tafiditra amin'izany ny Hetsika bodoy nataon'ny Tupiniquim sy ny raharaham-pitsarana.
Ireny sy ny lohahevitra mifandraika aminy dia efa navondrona tanaty lohahevitra manokana nasongadina miisa efatra: Fantoka Ala: Amazon, Dossiê Belo Monte [amin'ny teny portiogey irery ihany], Zon'ny vazimba teratany ary ny Fampandrosoana Ankapobeny.
Portiogaly: Krizy, Fifehezan-kibo ary Hetsi-panoherana
Niainga tamin'ny Hetsi-panoherana nataon'ny “Taranaka Mpiketrika” tamin'ny volana marsa ka tonga hatramin'ny hetsi-panoherana ankapobeny tamin'ny 15 Oktobra, Tonga teo amin'ny fenitry ny krizy ara-toekarena sy ara-tsosialy tsy mbola nisy toy izany i Portiogaly tamin'ny 2011, izay nahitana ny fialan'ny governemanta sy ny fahatongavan'ny vaomiera eoropeana tao amin'ny firenena mba hijery izay “hanavotana” ny trosam-panjakana.
Mahavita mangina sy manohitra: mpanao fihetsiketsehana tafintohina eo ivelan ny Lapan ny tanànan i Porto. Saripika ny mpikarakara ny fihetsiketsehana, 15 Oktobra.
Nandray ny tambajotra sosialy ny mpiserasera hanetsiketsika hanohitra ny fepetra fifehezankibo henjana sy hitabataba ho fanoherana ny fangalam-bola tsy ara-drariny ataon'ny sampandraharaha mpanera (mpanombam-bidy), sy mba hataon'ny firenenkafa ho fakan-tahaka ihany koa, tahaka an'i Islandy, ahitana endrika hafa fandraisana anjaran'ny fanjakana [vahoaka].
Tamin'ny nametrahan'ny Global Voices ny pejy manokana hitantarana ny zavamisy ankehitriny manao hoe Eoropa tratran'ny krizy, tamin'ny Septambra no niasany ho tahaka ny tetezana nanamora ny fifampiresahana teo amin'ny Eoropeana tafintohina izay miaina olana mitovitovy.
Angola: Miteraka hetsi-panoherana ny 32 taona teo amin'ny fitondrana
Ao Angola, mihamivaingana eny an-dalambe sy ato amin'ny aterineto ny rivo-piokoana hanoherana ny fitondrana naharitra 32 taona notarihan'i José Eduardo dos Santos. Nanomboka tamin'ny volana Marsa ny hetsi-panoherana ary tsy nahombiazana ny fitondrana tamin'ny fisorohana azy ireny.
Tamin'ny Septambra, navesabesatra ny hery nampiasain'ny polisy handravana ny hetsi-panoherana, izay niafara tamin'ny fampidirana am-ponja mpanao fihetsiketsehana 18 raha vitsy indrindra. Tsy araka izay nantenaina moa fa tafavondrona indray ny hetsika, ary nitombo ihany koa ny olo-tsotra mampita ny vaovao ao amin'ny firenena.
Lahatsary nivoaka tao amin'ny hafatra Angola: Lahatsarin'ny Tanora mpanao Fihetsiketsehana nanaovana famoretana tao Luanda
Aterineto sy ny kolontsaina nomerika ao Brezila
Teraka tamin'ny alalan'ny hetsika noforonina, niaraha-mientana ary nahombiazana no nahazoana nampiely ny araka izay tratra ny aterineto tao Brezila tamin'ny 2011. Ohatra azo asongadina amin'izany ny hetsika avy amin'ny valantserasera hanakatonana bolongana mpametaveta zazakely iray [mg], sy ny antso tamin'ny alalan'ny Facebook hirotsaka handray anjara amin'ny “Hetsika Kitonotono Lehibe Avy Amin'ny Fahasamihafana”[fr] teny amin'ny faritra manodidina an'i São Paulo.
Hetsika afisy mivaky toy izao "Te-ho Maria Bethania izahay", nokarakarain i Leon Prado ao amin ny Facebook.
Hita tao amin'ny kianjan'ny serasera ihany koa ny trangan-javatra hafa mifandraika amin'ny kolontsaina nomerika. Nanambara ny Minisiteran'ny Kolontsaina tamin'ny Janoary fa nialany ny fahazoan-dalana Creative Commons ny vohikalany, fihemorana goavana eo amin'ny sehatry ny politikam-panjakana momba ny aterineto sy ny zon'ny mpamorona. Taoriana kelin'izany, ny volana marsa, nomen'ity minisitra ity ihany alalana ilay mpihira Maria Bethânia hanangombola 1,3 tapitrisa reais afa-karatsaka [tsy misy hetra] hananganana bolongana poezia, izay nahatezitra ny mpamaham-bolongana, ny mpisiokantsera ary ny mpikatroka eo amin'ny tontolon'ny kolontsaina.
Mipongatra ny trangana sivana an-tserasera ary indraindray, miraraka mankany amin'ny tontolo tsy virtoaly, ary eo ihany koa ny fandonana ny mpamaham-bolongana mitsikera ny mpitondra fahefana.
Nahare fandrahonana hamono hahafaty indray an'i Ricardo Gama izahay ny volana desambra, fa izy dia mpamaham-bolongana momba ny fihoaram-pahefana ataon'ny manampahefana sy ny fihetsika tsy manara-dalàna ataon'ny polisy breziliana. Efa nisy nitifitra i Gama tao Rio de Janeiro tamin'ny volana marsa. Nialoha ny faran'ny taona, maro ny tsy resy lahatra tamin'ilay “famonoantena tamin'ny alalan'ny fanantonantena” nolazaina momba ny fahafatesan'i Hamilton Alexandre, mpamaham-bolongana mampiady hevitra avy any Santa Catarina, ary nampiasaina ny valantserasera hitakiana fanadihadiana matotra kokoa momba ity raharaha ity.
Amin'ity taona 2012 ity izahay dia mbola hihaino ny tantara amin'ny alalan'ny aterineto lazain'ny olona manerana izao tontolo izao, ary hampiaka-peo azy ireny mba hahare avokoa ny vazantany efatra. Misokatra mandrakariva ny varavarana raha hirotsaka amin'ny lazain'ny gzetiboky Super tamin'ny fiandohan'ny taona hoe “iray amin'ny tetikasa folo nahafinaritra indrindra tamin'ny aterineto”.
Niaraka nanatontosa ity lahatsoratra ity i João Miguel Lima.